Nyochaa nyocha - Ngụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
NaEbe nrụọrụ weebụ na-etu ọnụ maka 1000 nke "psychics a gbaara ama" ihe na-atọ ọchị banyere nke ahụ abụghị nke ọ bụla n'ime ndị psychics ndị a gbaara ikike. Ndị ụlọ ọrụ ekwentị AT&T nwere Keen n'ezie. Onye ọ bụla nke kpọrọ onwe ya mmụọ nwere ike isonyere ma malite ịme ego na ndị ahịa na-enweghị atụ. Enweghị usoro nyocha ma ọ bụ nkwenye. Ndị ọrịa uche na-akwụ Keen.com ego ka ewepụta ha na saịtị ha, ma nye ha nọmba ekwentị Keen. Keen na-adị mma ma n’oge na-adịbeghị anya, ndekọ ha jupụtara n’ọtụtụ ndị ọhụụ ọhụụ, ndị ọkachamara n’ihe banyere uche ugbu a. Enweghị m ike ịkwado Keen ọzọ. Ọtụtụ ndị ha na-akpọ psychics adọkaala m. Ọ bụrụ n'ị na-achọ ezigbo ndụmọdụ m na-akwado ka ị zere Keen. Atụla anya ịghaghachi ego gị ma ọ bụrụ na ị na-agụkwa agụ dịkwa njọ .. agaghị m enwe ike.
Na.com malitere site na 10 afọ gara aga site na ezigbo uche. Na nso nso a onye nwe ya rere ụlọ ọrụ ahụ na AT&T, ụlọ ọrụ ekwentị, ma ha adabala ala kemgbe ahụ, ruo ugbu a na ha abaghị uru n'echiche m. Usoro nzaghachi ha dị mma mana ọ dị m ka ọ na-adị mfe njikwa.
Na emeela ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ọhụrụ iji mee ka ọ dịkwuo mma. Ọdịdị ọhụrụ ahụ masịrị m na achọtara m na ọ dị mfe ị ga-agagharị ma dịkwa ngwa ịzaghachi. Chọta mmụọ na ịhazi usoro ịgụ ha dị mfe. Ọ bụ ihe nwute na ndị ndụmọdụ ha na-agba mmụọ na-ada ma ọ bụ na-efu.
Ekwenyesiri m ike na m Na enweghị ngalaba ọrụ ndị ahịa. Ma ọ dịkarịa ala, enweghị m ike ịnweta mmadụ dị ndụ iji zaghachi. Enwetara m ozi ịntanetị na-aza m na-agwa m na nkwado ga-abanye n'oge na-adịghị anya mana enweghị m ụdị kọntaktị ọ bụla. Keen anaghị enye nkwado ekwentị naanị nkwado email.